Waxyaabaha bariiska: ka ogow wax kasta oo ku saabsan cuntadan caanka ah | Ragga Stylish
Ma taqaanaa sifooyinka bariiska? Waad ku mahadsan tahay qiimaheeda la awoodi karo iyo kala duwanaanshaheeda, bariiska ayaa hoos u dhigay hadhuudhka ugu caansan meeraha..
Waxaa lagu heli karaa qaabab badan, midabbo, iyo cabbirro, bariis waa a cuntada daruuriga ah ee malaayiin ka mid ah cuntooyinka adduunka oo dhan, laga yaabee inaad adigana leedahay.
1 Noocee ayaa caafimaad badan?
2 Bariiska maxaa laga sameeyaa?
2.3 Sida loo helo borotiinka
2.5 Fiitamiinada iyo macdanta
3 Ka taxaddar arsenic
4 Ereyga ugu dambeeya
Noocee ayaa caafimaad badan?
Tani waa muhiim: dhammaan noocyada bariiska ah si isku mid ah nafaqo uma leh. In kasta oo xaqiiqda ah in bariiska cad uu yahay kan ugu isticmaalka badan, sida lagu sheegay cilmi baaris, noocyada caafimaad ee ugu wanaagsan ee bariiska waa qamadiga oo dhan. Laakiin maxaa lagu talinayaa in lagu beddelo bariiska cad bariiska buniga ah? Aad ufudud: maxaa yeelay waa miro dhan, halka bariiska cad uu yahay hadhuudh la safeeyey.
Maaddaama ay haysaa dhammaan qaybaha hadhuudhka, bariiska bunni waa midka bixiya nafaqooyinka ugu muhiimsan: faybar iyo tiro wanaagsan oo fiitamiinno iyo macdano ah. Dhinaceeda, bariiska cad ayaa laga qaadaa qaybaha ugu nafaqada badan, taas oo si weyn u yaraynaysa astaamaheeda marka la barbardhigo qamadiga oo dhan.
Sidaas awgeed, bariiska buniga ahi waa isha weyn ee laga helo faybar, fiitamiino iyo nafaqooyin kale oo xiise u leh habsami u shaqaynta jidhkaaga. Haddii aad u baahan tahay inaad cunto badarro badan (mid ka mid ah howlaha sugaya ee dad badan), bariiska buniga ah shaki la’aan waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan. Sidan ayaad ku yareyn doontaa halista cudurka sonkorowga (laakiin taxaddar maxaa yeelay ku xadgudubka bariiska cad wuxuu leeyahay uun saameyn ka soo horjeedda), wadno xanuun, kansar iyo buurnaan.
Bariiska maxaa laga sameeyaa?
Ogaanshaha halabuurka bariiska ayaa kaa caawin doona inaad fahanto nafaqooyinka ay bixiso iyo tirada ay tahay in la siiyo.. Sidaa awgeed, waxaad awood u yeelan doontaa inaad siiso doorka ugu fiican ee suurtogalka ah ee cuntadaada oo markaa aad uga faa'iidaysato waxyaabaha ugu badan ee bariiska ah.
Maaha fursad jaanis ah in markaad cunaysid bariiska aad marwalba dareento tamar badan: bariiska ayaa ka mid ah kuwaas cuntada tamarta. Sababta ayaa ah in bariiska inta badan uu ka kooban yahay karbohaydraytyo. Dhinaca kale, si ka duwan cuntooyinka kale ee hodanka ku ah karbohaydraytyada, bariisku ficil ahaan ma laha dufan. Si kastaba ha noqotee, si aan loo kordhin miisaan, waxaa lagugula talinayaa inaad xakameyso tirada.
Waa in la ogaadaa in cunista bariiska ay sidoo kale kaa caawin doonto hawsha buuxinta baahiyahaaga borotiinka maalin kasta, tan iyo wuxuu ka koobanyahay qadar yar oo nafaqadan muhiimka u ah jirka.
Sida loo helo borotiinka
Fiiri maqaalka: Cunnooyinka borotiinka leh. Halkaas waxaad ka heli doontaa waxaad cuni lahayd si aad u hesho borotiin badan.
Waa sidee xaaladda marinkaaga mindhicirka? Haddii aad u baahan tahay waxyaabo si dhaqso leh ugu dhaqaaqaya halkaas, bariiska buniga ah ayaa ah xulaf in laga fiirsado sababo la xiriira maadada fiber-ka. 100 garaam oo bariis bunni ah ayaa ku siinaya fursad aad ku hesho ku dhowaad 2 garaam oo faybar ah, oo xiiso u leh safarka laakiin sidoo kale waxyaabo kale oo badan, sida inaad ku qanciso rabitaankaaga hab waara.
Haddii aad doorbideyso bariiska cad, sidoo kale waxaad heleysaa fiber, laakiin qaddar aad u yar. 100 garaam oo bariis cad ah kuma jiraan xitaa nus garaam oo faybar ah halabuurkeeda.
Bariisku wuxuu kaloo sameeyaa xoogaa inuu kaa caawiyo inaad hesho qadarka maalinlaha ah ee lagugula taliyo ee fiitamiinnada, macdanta iyo antioxidants. Cuntadan waxaa ku jira maaddada loo yaqaan 'thiamine', niacin, vitamin B6, manganese, magnesium, phosphorus, iron iyo zinc. Layaab ma leh, bariiska bunni ayaa ka roon caddaanka arrintan sidoo kale.
Ka taxaddar arsenic
Ilaa hadda sifooyinka bariiska, laakiin sidoo kale waa lagama maarmaan in la xuso dib u dhaca qaarkood. Marka hore, bariisku wuxuu u eg yahay inuu nuugo arsenic ka badan dhirta kale, oo mayrinteedu kama dhigayso inay tagto. In kasta oo guud ahaan aysan dhibaato ahayn, cunista xaddi badan oo birtan culus muddo dheer ayaa loo arkaa inay khatar ku yihiin caafimaadka.
Mid ka mid ah halista la xiriirta ayaa ah fursadda sii kordheysa ee lagu horumarinayo noocyada kansarka qaarkood, nooca sonkorowga 2, iyo cudurka wadnaha. Sida muuqata, ku kariyo biyo badan (oo hadhow la tuurayo) waxay kaa caawin doontaa in laga takhaluso qadar aad u badan oo arsenic ah oo bariiska ku jira. Si kastaba ha noqotee, ma caawinayso in la baabi'iyo wax walba iyo, marka lagu daro, fiitamiinnada iyo macdanaha qaarkood ayaa baaba'aya
Laakiin arsenic kaliya maaha hoos u dhaca bariiska. Sidoo kale waa inaan sheegnaa nafaqeeyayaalka sida nafaqeynta jirka. Nafaqada ka hortagga ahi waxay jidhka ka hor istaagi kartaa inuu nuugo nafaqooyinka qaarkood. Marka laga hadlayo acid acid, iyagu waa bir iyo zinc. Laakiin ha walwelin, saameynteeda ficil ahaan waa la dareemi karaa haddii aadan cunin bariiska dhammaan cuntooyinka maalintii muddo dheer, oo ay ku jiraan labadaba bariiska iyo badeecooyinka ku saleysan (oo ay ku jiraan caanaha bariiska iyo alaabada kale ee ku dhex jirta caanoheeda. ).
Marka la eego, noocyada guuleysta waa bariis cad, maaddaama qaddar badan oo arsenic iyo acid ah laga helay sarreen dhan. Miyaad ka walwalaysaa? Waxay kuxirantahay Haddii aad cuntid noocyo kaladuwan oo aad u cuntid bariis si dhexdhexaad ah, uma baahnid inaad ka walwasho arsenic ama waxyaabaha nafaqada leh ee cuntadan caanka ah.. Maxay ka dhigan tahay in si dhexdhexaad ah loo cuno bariiska? Dhowr jeer usbuucii waa inaysan kuu keenin wax dhibaato ah.
Bariiska cad ma xuma, dhab ahaantii waad ku dari kartaa iyada oo aan wax dhibaato ah ku jirin cuntadaada caafimaadka leh. Laakiin haddii aad raadineyso kalooriyeyaal ay weheliyaan tiro caan ah oo nafaqooyin ah, markaa waa inaad ku sharftaa bariiska buniga ah. Xusuusnow inaad u isticmaashid si dhexdhexaad ah si looga fogaado inaad ku badiso kalooriyeyaasha, iyo sidoo kale arrinta arsenic iyo nafaqada daran.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Guryaha bariiska